Archives maka Law & More
Banyere chepụtara: Law & More
Na Netherlands, mmezi bụ onyinye ego maka mmefu ego nke onye bụbu onye ọlụlụ na ụmụaka ọ bụla mgbe ịgba alụkwaghịm. Ọ bụ ego ị ga-enweta ma ọ bụ nke ị ga-akwụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na inwetaghị ego ị ga-eji na-egbo mkpa gị, isiokwu…
Onye ọ bụla nwe ụlọ nwere ikike nwere ikike abụọ dị mkpa: ikike ịnụ ụtọ ndụ na ikike ịgbazite nchedo. Ebee ka anyị tụlere ikike izizi nke onye nwe ụlọ n'ihe metụtara ọrụ nke onye nwe ụlọ ahụ, ikike nke abụọ nke onye ahụ bi na ya bịara na blog dị iche banyere […]
Mgbe ị gbazitere ụlọ na Netherlands, ịnwere ikike ịgbazite nchedo na akpaghị aka. Otu ihe a metụtara ndị ọrụ gị na ndị ọrụ ụlọ. Onwere, mgbazinye nchedo comprises akụkụ abụọ: mgbazinye ego nchedo na mgbazinye mgbazinye megide nchupu nke tenancy nkwekọrịta n'echiche na nwe ulo nwere ike ọ bụghị nanị […]
Gba alụkwaghịm na 10 nzọụkwụ
O siri ike ikpebi ma ị ga-agba alụkwaghịm. Ozugbo ị kpebiri na nke a bụ naanị ihe ngwọta, usoro ahụ na-amalite n'ezie. Ọtụtụ ihe kwesịrị ịhazi na ọ ga-abụkwa oge mmetụta uche siri ike. Iji nyere gị aka n'ụzọ gị, anyị ga-enye […]
Itinye akwụkwọ maka ikike ọrụ na Netherlands. Nke a bụ ihe ị kwesịrị ịma dị ka nwa amaala UK.
Ruo 31 Disemba 2020, iwu EU niile dị na United Kingdom na ụmụ amaala nwere amaala Britain nwere ike ịmalite ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ Dutch, yabụ, na-enweghị ebe obibi ma ọ bụ ikike ọrụ. Kaosinadị, mgbe United Kingdom hapụrụ European Union na Disemba 31, 2020, ọnọdụ agbanweela. […]
Ọrụ nke onye nwe ụlọ
Nkwekọrịta mgbazinye nwere akụkụ dị iche iche. Akụkụ dị mkpa nke a bụ onye nwe ụlọ na ọrụ dịịrị ya na onye nwe ụlọ ahụ. Ebe mmalite banyere ọrụ nke onye nwe ụlọ bụ "ọ theụ nke onye nwe ụlọ ahụ nwere ike ịtụ anya dabere na nkwekọrịta mgbazinye". Ka emechara, ibu ọrụ […]
Kedu ihe ị ga - eme ma ọ bụrụ na ịnweghị ike ịkwụ ụgwọ ọrụ ego gị?
Alimoni bu ego enyere onye luru ya na umuaka aka dika ihe ntinye aka. A na-akpọkwa onye ga-akwụ ụgwọ alimoni dị ka onye ji ụgwọ mmezi. A na-akpọkarị onye na-enweta alimoni dị ka onye nwere ikike ịkwado. Alimoni bụ ego nke ị […]
Ndị isi ụlọ ọrụ kwesịrị iburu n'uche ụlọ ọrụ oge niile. Gịnị ma ọ bụrụ na ndị nduzi ga-eme mkpebi ndị metụtara ihe ndị na-amasị ha? Kedu mmasị na-aga n'ihu na gịnị ka onye nduzi na-atụ anya ime n'ọnọdụ dị otú ahụ? Kedu mgbe esemokwu nke […]
2021 bụ afọ nke ihe ole na ole ga-agbanwe n'ihe gbasara iwu na ụkpụrụ. Nke a bụkwa ikpe gbasara ịtụgharị ụtụ. Na November 12, 2020, Houselọ Ndị Nnọchiteanya kwadoro ụgwọ maka ndozi nke ụtụ mbufe. Ebumnuche nke a […]
Onye nwe ya bụ ikike zuru oke mmadụ nwere ike ịnwe dị mma, dị ka Usoro Obodo si kwuo. Nke mbụ, nke ahụ pụtara na ndị ọzọ kwesịrị ịkwanyere onye nwe ya ùgwù. N’ihi ikike a, ọ bụ onye nwe ya ga-ekpebi ihe a na-eme ngwongwo ya. Maka […]
Idegharị iwu NV na oke nwoke / nwanyị
Na 2012, iwu BV (ụlọ ọrụ nkeonwe) ka emeziri ka ọ dị mfe. Site na nbanye nke Iwu na Mbelata na ngbanwe nke Iwu BV, enyere ndị nwe oke ohere ịhazi mmekọrịta ha, nke mere na ohere ọzọ ka emepụtara iji mezie usoro ụlọ ọrụ ahụ [
Azụmaahịa Nzuzo Azụmaahịa (Wbb) etinyere na Netherlands kemgbe 2018. Iwu a na-etinye Ntuziaka European na nkwekọ nke iwu na nchekwa nke usoro esi amatabeghị na azụmahịa. Ebumnuche nke iwebata ntuziaka European bụ igbochi nkewa iwu na niile […]
Nkwado mba ụwa
Na omume, ndị nne na nna ezubere ịmalite ịmalite usoro mmemme na mba ọzọ. Ha nwere ike inwe ọtụtụ ihe kpatara nke a, ha niile jikọtara ọnọdụ ọjọọ nke nne na nna ezubere n'okpuru iwu Dutch. A na-atụle ndị a n'ụzọ dị mkpirikpi n'okpuru. N'isiokwu a anyị na-akọwa na ohere ndị dị na mba ọzọ nwere ike […]
Nyocha na Netherlands
Ime ime, ọ dị nwute, ọ bụghị okwu maka nne na nna ọ bụla nwere ọchịchọ ịmụ ụmụ. Na mgbakwunye na enwere ike ịnabata, nne nwere ike ịbụ nhọrọ maka nne ma ọ bụ nna ezubere. N'oge a, iwu anaghị achịkwa surrogacy na Netherlands, nke na-eme ka ọnọdụ iwu dị […]
Ike nne na nna
Mgbe a mụrụ nwatakịrị, nne nwa ahụ na-enwe ikike nke nne na nna n’ebe nwa ahụ nọ. Ewezuga ọnọdụ ebe nne n'onwe ya ka bụ obere nwa n'oge ahụ. Ọ bụrụ na nne lụrụ di ma ọ bụ nwunye ya ma ọ bụ nwee njikọ edenyere aha ya n'oge ọmụmụ nwa, […]
Ongwọ maka imeziwanye mmekọrịta
Ruo taa, Netherlands nwere ụdị iwu atọ nke mmekọrịta: mmekọrịta, mmekorita izugbe (VOF) na oke mmekọrịta (CV). A na-ejikarị ha eme ihe na obere ụlọ ọrụ obere (SMEs), ngalaba ọrụ ugbo na ngalaba ọrụ. Dị mmekọrịta atọ a dabere na iwu gbasara mkpakọrịta nwoke na nwaanyị […]
Ọ na - eme mgbe niile na ndị were gị n’ọrụ nwere obi abụọ gbasara ndị ọrụ ha na - akọ banyere ọrịa ha. Dịka ọmụmaatụ, n'ihi na onye ọrụ na-akọkarị ọrịa na Mọnde ma ọ bụ Fraịdee ma ọ bụ n'ihi esemokwu ụlọ ọrụ. A na-ahapụ gị ka ị jụọ ajụjụ gbasara ọrụ onye ọrụ gị ma kwụsịtụ ịkwụ ụgwọ ụgwọ ọrụ ruo mgbe emechara ya [
Gba alụkwaghịm gụnyere ọtụtụ ihe Usoro ịgba alụkwaghịm nwere ọtụtụ usoro. Kedu usoro aga-eme ma ị nwere ụmụ, ma ma ị kwenyeburu tupu gị na onye gị na ya lụrụ anwụ nwee nkwekọrịta. Na mkpokọta, a ga-agbaso usoro ọkọlọtọ ndị a. Nke mbụ […]
Ọ na-ewe iwe ma ọ bụrụ na onye ọrụ gị anaghị eso ntuziaka gị. Ke uwụtn̄kpọ, owo emi afo m cannotkemeke ndiberi edem ke utom ke utịturua m̀m on owo emi ekerede ke ndisịne ọfọn̄ fo inyeneke ebuana ye imọ. […]
Kedu ihe bụ alimoni? Na Netherlands, alimoni na - etinye ego maka ego ibi ndụ nke onye gị na ya lụrụ na ụmụaka mgbe ịgba alụkwaghịm. Ọ bụ ego ị na-enweta ma ọ bụ nke ị ga-akwụ kwa ọnwa. Ọ bụrụ na ịnweghị ego ị ga-ebi na ya, ịnwere ike ịnweta alimoni. […]
Ọ bụrụ na esemokwu bilitere n'etiti ụlọ ọrụ gị nke enweghị ike idozi n'ime ya, usoro tupu ụlọ ọrụ Enterprise nwere ike ịbụ ụzọ kwesịrị ekwesị iji dozie ha. A na-akpọ usoro dị otú a usoro nyocha. N'ime usoro a, a gwara ụlọ ọrụ Enterprise ka ị nyochaa iwu na usoro ihe […]
Achụpụ n'oge oge probation
N'oge oge mmuta, onye were gị n'ọrụ na onye were ya n'ọrụ nwere ike ịmata onwe ha. Onye ọrụ nwere ike ịhụ ma ọrụ na ụlọ ọrụ ọ masịrị ya, ebe onye were ha n'ọrụ nwere ike ịhụ ma onye were ya n'ọrụ ọ dabara na ọrụ ahụ. N'ụzọ dị mwute, nke a nwere ike iduga n'ịchụpụ onye ọrụ ahụ. […]
Oge nkwụsị na oge ngosi
You chọrọ tufuo nkwekọrịta? Nke ahụ anaghị ekwe omume ozugbo. N'ezie, ọ dị mkpa ma enwere nkwekọrịta ederede yana ma enwere nkwekọrịta maka oge ọkwa. Oge ụfọdụ oge edetu iwu na-emetụta nkwekọrịta ahụ, ebe gị onwe gị nwere […]
Cesgba alụkwaghịm mba ụwa
Ọ na-abụbu omenala mmadụ ịlụ onye si na ya ma ọ bụ onye si n'otu obodo. N’oge ugbu a, alụm di na nwunye n’etiti ndị si mba dị iche iche na-abawanye. O di nwute, 40% nke di na nwunye na Netherlands na-agba alụkwaghịm. Kedu otu ọrụ a si arụ ọrụ ma ọ bụrụ na mmadụ bi na mba na-abụghị […]
Atụmatụ nne na nna n'ihe gbasara ịgba alụkwaghịm
Ọ bụrụ na ị nwere obere ụmụaka ma gbaa alụkwaghịm, a ga-enwe nkwekọrịta maka ụmụaka. A ga-edekọ nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ na nkwekọrịta na nkwekọrịta. A maara nkwekọrịta a dị ka atụmatụ nne na nna. Atụmatụ ịzụ ụmụ bụ ezigbo ihe ndabere maka ịgba alụkwaghịm nke ọma. Bụ […]
Divorcegba alụkwaghịm bụ ihe na-adịghị mma na-emetụta ọtụtụ mmetụta. N'oge a ọ dị mkpa na ọtụtụ ihe edoziziri nke ọma ma ya mere ọ dị mkpa ịkpọ enyemaka kwesịrị ekwesị. N'ụzọ dị mwute, ọ na-eme na omume na-eme n'ọdịnihu bụbu mmekọ na-enweghị ike […]
You emebila iwu corona wee rie nhuu? Mgbe ahụ, ruo n'oge na-adịbeghị anya, ị nọ n'ihe ize ndụ nke ịbụ onye ndekọ ndekọ mpụ. Iwu ego corona na-aga n'ihu ịdị, mana enweghị ederede na ndekọ ndị omempụ. Kedu ihe kpatara ndekọ mpụ jiri bụrụ ụdị ogwu dị n'akụkụ […]
Ismchụpụ bụ otu n'ime usoro kachasị dị anya na iwu ọrụ nke nwere nsonaazụ dị ukwuu maka onye ọrụ. Ọ bụ ya mere na dịka onye were gị n'ọrụ, n'adịghị ka onye ọrụ, ị nweghị ike ịkpọ ya ịkwụsị. You bu n'obi ịchụ onye ọrụ gị n'ọrụ? Ọ bụrụ otú ahụ, ị ​​ga-eburu n'uche ụfọdụ ọnọdụ […]
Principlekpụrụ bụ isi na-emetụta na iwu nkwụghachi ụgwọ Dutch: onye ọ bụla na-ebu mmebi nke ya. N'ọnọdụ ụfọdụ, naanị na ọ nweghị onye ọ bụla ga-aza ajụjụ. Dị ka ihe atụ, chee echiche banyere ihe akụ́ mmiri igwe mere ka mmiri zoo. Ọ bụ onye kpatara mmebi gị? Ọ bụrụ otú ahụ, ọ ga-ekwe omume ịkwụ ụgwọ mmebi ahụ ma ọ bụrụ na […]
Mgbe onye si mba ọzọ nwetara akwụkwọ ikike obibi, a na-enyekwa ya ikike ijikọ ezinụlọ. Mweghachi ezinụlọ pụtara na ndị otu ezi na ụlọ nwere ikike ịbịa Netherlands. Nkeji edemede 8 nke European Convention on Human Rights na-enye ikike maka […]
N'ọnọdụ ụfọdụ, ịkwụsị ọrụ ọrụ, ma ọ bụ ịgba arụkwaghịm, dị mma. Nke a nwere ike ịbụ ikpe ma ọ bụrụ na ndị abụọ ahụ na-atụ anya ịhapụ akwụkwọ ma kwubie nkwekọrịta nkwụsị na nke a. Nwere ike ịgụtakwu banyere nkwụsị site na nkwenye na nkwekọrịta nkwụsị na saịtị anyị: Dismissal.site. Na mgbakwunye, […]
Ọrụ ọ bụla ị na-arụ, ụkpụrụ bụ isi na Netherlands bụ na onye ọ bụla ga-enwe ike ịrụ ọrụ n'enweghị nsogbu na ahụike. Ọhụụ dị n'okwu a bụ na ọrụ ahụ agaghị eduga n'ọrịa anụ ahụ ma ọ bụ nke ọgụgụ isi ma ọ bụghị ịnwụ n'ihi ya. Principlekpụrụ a bụ […]
Onye ji ụgwọ na enweghịzi ike ịkwụ ụgwọ ya ji ụgwọ nwere nhọrọ ole na ole. O nwere ike itinye akwụkwọ maka nkwụnye ego nke aka ya ma ọ bụ tinye maka nnabata na nhazi mmezigharị iwu. Onye na-binye ego nwekwara ike itinye akwụkwọ maka ụgwọ nke onye ji ya ụgwọ. Tupu a ụgwọ nwere ike ịbụ […]
Lawsuitlọ ikpe a maara nke ọma na 2019 : Thelọ ọrụ na-ahụ maka njikwa na Mexico CRT (Consejo Regulador de Tequila) ebidola ikpe megide Heineken nke kwuru okwu Tequila na karama Desperados ya. Desperados bụ nke ndị otu ahọpụtara mba ụwa Heineken ma dịka ndị na - eme biya, bụ “biya biya tequila”. Desperados […]
Ma ndị ọrụ ma ndị were gị n’ọrụ nwere ike ịbịakwute ndị a chụrụ n’ọrụ n’ụzọ dị iche iche. Na-ahọrọ ya n’onwe gị ka ọ bụghị? Na n'okpuru ọnọdụ ndị dị a ?aa? Otu n'ime ụzọ kachasị ike bụ nchụpụ ozugbo. Ọ̀ bụ otú ahụ ka ọ dị? Mgbe ahụ nkwekọrịta ọrụ n'etiti onye ọrụ na onye were gị n'ọrụ ga-akwụsị ozugbo. […]